Golden Land Myanmar Property Service is always ready to service perfectly. Warmly welcome to those who want to rent or buy some nice apartments or house New Mini Condo For Rent * (3) Unit For Rent * * Location * Near. Bargayar Road Kyuntaw ...
Mahar Nawayat Condo for rent
Mahar Nawayat Condo for rent #1500-USD Located in between Marchant Road and Mahar Bandula Road, Mahar Bandula Road, Botahtaung Township, Yangon. ^ 1440 sqft ^2Master Bedrooms with bathroom ^ 1 Single Bedroom ^ Fully Decorated ^ Fully ...
🏙ဈေးနှုန်းလည်းမဆိုး အခန်းကလည်းသပ်ရပ်တဲ့ ကွန်ဒိုတိုက်ခန်းငှားရန်ရှိပါတယ်ရှင့် 📍တည်နေရာ-တာမွေမြို့နယ် အကျယ်အ၀န်း-1350 sqft 🛏 အခန်းပါဝင်မှု-(၃)ခန်း 🛁 ရေချိုးခန်းပါဝင်မှု-(၂)ခန်း 📎 အခြားပါဝင်မှု - အဲကွန်း၊ဓါတ်လှေကား 💰တလငှားရမ်းခ -ကျပ် ၁၀ သိန်း ...
Condo for rent Locatedin Byint Naung Tower II, near Hledan Center and Sein Gay Har Surpermarket, Hledan , Kamaryuk Township, Yangon. Owner accept office and residencial. ^ 1600 sqft ^ 3rd floor ^ 1 Master BR ^2Single Bedrooms ^5AC ^ Perquet ...
ရန်ကင်းမြို့နယ် Condo အငှါး
ရန်ကင်းမြို့နယ် Condo အငှါး #အကျယ်....900sqf #အလွှာ.......1-st floor #အိပ်ခန်းပါဝင်မှု....1-master,2-single #အခြားပါဝင်မှု......Fully furnish,Carparking,4-ac, #အငှါး......11 သိန်း ↪ဒါလေးကူညီပါ။ အိမ်ပုံလေး Screanshoot လုပ်ပြီး Viber.... +959775677770 ...
【Corresponds to English and Myanmar】 👉 သုဝဏ္ဏ ဘောလုံးကွင်း၊ Orange Supermarket နားက ကွန်ဒိုလေးနော်... 👈 ✏မိသားစုပဲနေနေ ရုံးခန်းပဲဖွင့်ဖွင့် အဆင်ပြေ✏ ⏩ ( RN - 6587) နေရာ - တာမွေ မြို့နယ် အလွှာ - ၁၇ လွှာ + ၁၈ လွှာ (Pent House) အခန်းအမျိုးအစား - ...
【Corresponds to English and Myanmar】 💧 MOOM Real Estate မှကြိုဆိုပါတယ်ရှင်💧 👉 လူကြီးမင်းတို့အတွက် ထူးခြားကောင်းမွန်တဲ့ Hill Top Vista Condo အခန်းလေးနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးပါရစေရှင်✌လုံးဝ လူမနေရသေးတဲ့ အသစ်စက်စက် အခန်းလေးနော် 😍 👌 ဈေးနှုန်းသင့်ရမယ် ၊ ...
စမ်း​ချောင်းသီသန့်​ ဌားရန်​ ရှိပါသည်​...
စမ်း​ချောင်းသီသန့်​ ဌားရန်​ ရှိပါသည်​... ဇလွန်​လမ်း...၁၂​ပေခွဲ ၅၀​ပေ ၅လွှာ Hall. လကုန်​တက်​ ၁သိန်း၉သောင်း ပြည်​သူ့ကွက်​သစ်​ ၂လမ်း...၁၂​ပေခွဲ ၅၀​ပေ ၅လွှာ Hall လကုန်​တက်​ ၂သိန်း၂သောင်း ရန်​ကြီး​အောင်​လမ်း...၁၂​ပေခွဲ ၅၀​ပေ. ...
# ( ၆၂ ) လမ်းမကြီးအနီးဂိုဒေါင်အဌား #
# ( ၆၂ ) လမ်းမကြီးအနီးဂိုဒေါင်အဌား # # R( 144 ) # ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ် # ( ၆၂ ) လမ်းမကြီးအနီး , ( စံပြ x သခင်ဖိုးလှကြီး ) ကြား # ပေ ( ၁၂၀ x ၄၅ ) , ဂိုဒေါင် # တလဌားရမ်းခ - သိန်း ( ၂၀ ) ( ညှိနှိုင်း ) ...
Check this url: https://www.lotayaproperty.com/property-for-rent?page=193